Ngwá ọrụ kachasị mma iji gbakọọ kilomita 1 site n'ụlọ | Gam akporosis
Ngwá ọrụ kachasị mma iji gbakọọ kilomita 1 site n'ụlọ
Echi bu nnukwu ụbọchị maka ọtụtụ nde ụmụaka na Spain. Ọbụghị ụbọchị nke ndị amamihe ahụ, mana ọ ga-ewute ha nke ukwuu. Mgbe ihe karịrị ụbọchị iri anọ nke ụlọ mkpọrọ, na itinye usoro ịgbasawanye nke gọọmentị na-ewere, Bọchị ụka a ka ụmụaka ga-enwe ike ịpụ ọzọ.
Spanishmụaka niile nọ na Spain ga-enwe ike ịhapụ ụlọ naanị n'ime elekere ole na ole mana, dịka ọ dị n'echiche, ya na usoro mgbochi. N'etiti idebe ihe ọcha, oke oge na anya ezi uche, e nwere ihe dị ezigbo mkpa, na nke ahụ bụ Ha agaghị enwe ike isi n’ụlọ ha pụọ ​​ihe karịrị otu kilomita pụọ. Taa ka anyị wetara gị a mfe ngwá ọrụ nke mere na ị maara otú ebe i nwere ike na-aga na-eje ije nye ụmụaka nọ n'ụlọ.
Ebe tere aka dị kilomita 1 site n'ụlọ gị?
Anyị ahụwo otú teknụzụ dị mkpa maka ndụ anyị iji gaa n'ihu, dị ka o kwere mee, n'ụbọchị a na-eme ka ndị na-eme ihe iche iche dịgide. Na nkwurịta okwu Site na ngwa ngwa ozi, ihe oku vidiyo, na n'ezie, ohere nke gaa n'ihu n'ọrụ gị maka nde mmadu Site na igwe. Ọ bụrụ na anyị enweghi ụdị azịza a, ụbọchị ndị anyị nọrọ n'ụlọ, na ndị nke anyị ka nwere, ga-aka ogologo.
Inwe ike ịgbaso usoro mmachi ahụ mgbe ị na-apụ n'ụlọ iji soro ụmụaka gawa ije, anyị ewetara gị ngwa ọrụ iji gbakọọ, n'ụzọ kachasị dị mfe, kedu ebe ị ga-aga. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịmara oke nke 1 kilomita gburugburu site na otu isi, dịka njirimara anụ ahụ nke ebe anyị bi. Na zere nsogbu ndị isi nwere ike ịgụnye mkpesa na iwuEkele geomati.co anyị ga-edo anya banyere oke kwere.
Nke a abụghị ngwa iji, ọ bụ weebụsaịtị na interface dị ka isi dị ka ọ dị mfe iji. Ozugbo anyị banyere webkm 1km, anyị ga-ahụ maapụ Spain. Anyị ji naanị ụgwọ mbugharị na map ahụ ruo mgbe ịchọta ebe ụlọ anyị dị. Mgbe anyị nọ n'ụlọ anyị, naanị ihe anyị ga-eme bụ pịa ya, na akpaghị aka A translucent gburugburu ga-egosi ebe anyị nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya ókè nke 1 km site na ebe ahọpụtara
Chọpụta ókè ị ga - esi soro ụmụ gị gagharị agagharị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ngwá ọrụ kachasị mma iji gbakọọ kilomita 1 site n'ụlọ
Huawei MatePad bụ onye ọrụ: ogwe 10,4, Kirin 810 na M-Pencil
Gboard ga-ekwe ka nnomi dị ngwa na mado na ọrụ ọhụrụ